कमेडी च्याम्पियनको दोस्रो सिजनमा २४ प्रतियोगी छनोट- मनोरञ्जन - कान्तिपुर समाचार
काठमाडौँ — 'कमेडी च्याम्पियन सिजन–२' को घोषणा गरिएको छ । फागुन २१ बाट कान्तिपुर टेलिभिजनमा प्रसारण हुने कार्यक्रमका लागि २४ प्रतियोगी छनोट भएको निर्देशक विशाल भण्डारीले जानकारी दिए ।
उनका अनुसार दोस्रो सिजनका लागि देश तथा विदेशबाट प्राप्त भएको ६ हजारभन्दा बढी डिजिटल अडिसन प्राप्तबाट १ सय ८० प्रतियोगीलाई काठमाडौं बोलाएर फिजिकल अडिसन गराइएको छ । कार्यक्रममा पहिलेकै निर्णायक रहनेछन् । अघिल्लो वर्ष निर्णायकमा सन्तोष पन्त, मनोज गजुरेल, प्रदीप भट्टराई र ऋचा शर्मा थिए ।
कार्यक्रमको उद्घोषण रीमा विश्वकर्माले नै गर्नेछन् । थ्री प्रोडक्सनले निर्माण गर्ने कमेडी च्याम्पियनको कार्यकारी निर्मातामा केकी अधिकारी, विशाल भण्डारी, रीमा विश्वकर्मा र राज घिमिरे छन् ।
निर्देशक भण्डारीले कार्यक्रमलाई राम्रो बनाउन आफूहरुले प्रतियोगीहरुलाई धेरै मिहिनेत गर्न लगाइएको बताए ।
प्रकाशित : फाल्गुन १२, २०७७ १७:५१
सर्वोच्च अदालतको फैसला सामान्य : प्रधानमन्त्री ओली
'मेरा भाइहरुले लड्डु ख्वाइख्वाइ गरेका छन् । जिते भनेका छन् के जिते मलाई थाहा छैन'
काठमाडौँ — प्रधानमन्त्री एवं नेकपा अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले प्रतिनिधिसभा पुन:स्थापना गर्ने सर्वोच्च अदालतको फैसला सामान्य रहेको बताएका छन् ।
नेपालको माटोको डिजिटल नक्सा सार्वजनिक कार्यक्रमलाई बुधबार सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले अदालतको फैसला सामान्य भएको भन्दै यसले आफूलाई कुनै असर नगर्ने बताए ।
आफू प्रधानमन्त्री छँदासम्म राम्रो काम गर्ने बताउँदै ओलीले अदालतको फैसलाले प्रभाव त पारेको हो त होइन ? भन्ने प्रश्न गर्दै ओलीले भने, 'यो सामान्य कुरा हो । मेरा भाइहरुले लड्डु ख्वाइ ख्वाइ गरेका छन् । जिते भनेका छन्, के जिते मलाई थाहा छैन । लड्डु खाएर के पाउँछ हेर्नु छ ?'
नेकपा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल र माधवकुमार नेपालले अदालतको फैसलापछि मंगलबार साँझ चितवनमा एक अर्कालाई लड्डु खुवाएर खुसी साटासाट गरेको विषयमा ओलीले उक्त टिप्पणी गरेका हुन् ।
प्रधानमन्त्री ओलीले थपे, 'मेरो विचारमा भोलि/पर्सिदेखि राजीनामा माग्नुहुन्छ कि भन्‍ने लागिरहेको छ । राजीनामा देउ, राजीनामा देउ । त्यतापट्टी चिन्ता गर्नु पर्दैन । को मान्छे कतिखेर हर्टअट्याक भएर मर्न सक्छ । ब्रेन ह्यामरेज भएर मर्न सक्छ । गाडी ठोक्किएर मर्न सक्छ । जिन्दगीको कुनै ठेगान छैन । जबसम्म बाँचिन्छ तबसम्म राम्रो काम गर्ने हो ।'
देश विकासको सन्दर्भ र आकांशमा आफ्नो दृढ रहेको भन्दै ओलीले स्वार्थबाट लपेटिएका मान्छेहरुमा सर्वोच्चका फैसला जस्ता कुराहरुले धेरै असर गर्ने बताए ।
तत्काल राजीनामा नदिने संकेत दिँदै ओलीले कार्यक्रममा भने, 'अहिलेको सरकार छ । सरकार रहन्छ । विकासको कुरा अगाडि बढिरहेको छ । अगाडि बढ्छ । तपाईंहरु विकासको मार्गमा निश्चिन्त रुपमा अगाडि बढ्नुस् ।'
प्रकाशित : फाल्गुन १२, २०७७ १७:२१